Iphalishi kufanele khona ekudleni kwethu. Kodwa uma abantu abadala ukudla lezi izitsha ubumnandi izingane awavamile abalandeli iphalishi. Ngakho-ke, kumelwe ukuba ziyakwazi ukuzivumelanisa ukupheka ke thina ngakho kangangokuthi kwakubonakala ingane esihlwabusayo uswidi. Ubisi iphalishi elenziwe kusuka okusanhlamvu ezahlukene. Omunye ezihlukahlukene kuyinto ubisi irayisi iphalishi. Indlela sokulungiselela yayo, kanye kusukela nezinye okusanhlamvu okusanhlamvu is okwethulwa kulesi sihloko. Mhlawumbe, ngemva kokuyifunda, uzothola izindlela ezimbalwa ewusizo.
Ukuze uqale ukutshela indlela ukulungiselela elula irayisi iphalishi ubisi. Indlela engasetshenziswa njengesisekelo ukulungiswa nezinye izinhlobo zokusanhlamvu. Thatha irayisi futhi ugeze khona ngokucophelela. Bese usigcwalisa vodichkoj abandayo bese efakwa phezu plate. Ngesinye ingxenye irayisi kufanele cishe ezimbili izingxenye amanzi. Lapho amanzi amathumba, ingabe umlilo usemncane kakhulu, kodwa waqhubeka imizuzu. Okwamanje, ungakwazi Bilisa ubisi. Pheka irayisi emanzini kuze kuthambe. Ngokulandelayo, sitshelwa ngo shift bayifaka ubisi abilayo futhi upheke kuze irayisi iphekwe kuze ngokuphelele. Lapha kungenzeka ukuthi uthele ushukela uma uthanda, ingcosana elincane usawoti. Lapho liphalishi sethu simi ngomumo, thina wayimboza ipuleti bese wengeza ibhotela.
Kodwa indlela ukulungiselela iphalishi ubisi irayisi ne ukwengeza ithanga. Lokhu amnandi uswidi zama izingane ezijabule. Ithanga kudingeka ikhasi bese uthathe cubes amancane. Ukubeke ebhodweni, uthele amanzi bese gqoka umlilo. Pheka ithanga kuze ithenda. Bese wengeza e Fig pan, okwakubekelwa prewashed ngamanzi. Lapho irayisi iphekwe, uthele epanini ubisi uthele ushukela kanye ingcosana kasawoti. Beka noshukela ukunambitha. Kuyaziwa ukuthi izingane zithande awukudla sweet, ngakho ephalishini ngokulinganisela amnandi. Lapha futhi ukulungele ubisi iphalishi irayisi.
Recipe angase optionally kancane washintsha, ngokungeza ezinye izithako zakhe. Uma iphalishi add candied noma iyiphi izithelo, kuyoba esihlwabusayo ngaphezulu nokunomsoco. Ubisi iphalishi iyasiza, futhi lihambisana izithelo Uyi godsend, ngongqimba amavithamini namaminerali. Izithelo kumele wanezela ekuqa- zokugcina upheke kubo ngangokunokwenzeka. Uma kungekho izithelo kukusha uhlangothi, izithelo ke esikhundleni ungakwazi thatha omisiwe (amabhilikosi, asithena, omisiwe, njll). pre-bazanelise amanzi noma ungeze kwamaminithi ambalwa ngaphambi kokuphela ukupheka.
Ngokufanayo, ukulungiselela unyaluthi iphalishi ubisi. Indlela ehlukile kuphela ukuthi esikhundleni irayisi, sithatha amabele. Ngaphambi ukupheka kungcono ukususa izikhathi eziningana ngamanzi abandayo. It is ukwenziwa ngendlela efanayo njengoba ku Fig. Nakhu ukuthi ukulungiselela esiphundu unyaluthi iphalishi nge omisiwe. Geza unyaluthi futhi usigcwalisa amanzi. Setha i-pan phezu ukushisa bese upheka kuze ezithambile. Amanzi Akufanele sisheshe eziningi. Bese wengeza ubisi abilisiwe omisiwe wageza. Pheka kuze ithenda. Ekupheleni ukulungiselela kuyadingeka ukuze ungeze noshukela ukunambitha, ingcosana nosawoti kanye ukunambitheka kancane ibhotela.
Buckwheat futhi oluthile lokudla ewusizo kakhulu. Ukudla kwengane isivele izinyanga 6 kuhlanganisa yobisi nokunye okufana nokolweni. Indlela Yokuthola nakwesilandelayo. Buckwheat kumele ukuhlela futhi ubilise amanzi ukuze nengxenye. Bese wengeza ubisi epanini bese ugcine umlilo omncane, kwaze kwaba yilapho ekugcineni oluthile lokudla kubiliseni. Khona-ke kudingeka uthele ushukela, usawoti kanye ibhotela kancane. Uma ukupheka liphalishi ingane ke omningi, ungafaki, uholwe eminyakeni yobudala yomntwana.
Noma yimuphi lokudlela kungenziwa abilisiwe ukuze bazobe sebecela ukuthi kokubili abadala kanye nengane. Konke kuncike kulokho izithako uyisebenzisa ukupheka. Wonke umuntu uzothola okusanhlamvu, iphalishi zazo kuyoba ozithandayo. Futhi akudingeki ukuba irayisi ubisi iphalishi. Gcwalisa iresiphi uwedwa, wengeza ozithandayo izithelo, nezithelo candied nezinye izithako. Into esemqoka ukuthi kuphekwe isidlo like zonke kulelo nalelo khaya.
"Wheel" (yaseshashalazini, Tolyatti) repertoire, ikakhulukazi abadlali kanye nokubuyekeza